Perry၊ Wilt, Reid ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည် Disingenuous ဟုသုတေသနပြုသည်။ (“ ကိုယ်ကျင့်တရားမညီညွတ်ခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းသောပြProbleနာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Meta-analysis နှင့်အတူပေါင်းစည်းထားသောပုံစံတစ်ခု၊ ” ၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On Porn On
၏စာရေးဆရာများ ဒီလို့ခေါ်သုံးသပ်မှု စာဖတ်သူများတစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း porn နှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်း / ကငျြ့ဝတျမရရှိခြင်း၏တစ် function ကိုကြောင်းယုံကြည်ကြပေသည်။ သူတို့ကသာ CPUI-9 အပေါ်အားကိုးရသောလေ့လာမှုများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်, သော Co-စာရေးဆရာ Grubbs ကတီထွင်ထားတဲ့တူရိယာပြန်လည်သုံးသပ် skewed တွေ့ရှိချက်ကိုထုတ်လုပ်။ အဆိုပါပူးတွဲစာရေးဆရာများ ဂရုတစိုက်ချန်လှပ် သို့မဟုတ်အတု သုတေသနဆန့်ကျင် ကြောင်းခိုငျသူတို့ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်အပေါ်မှီခိုသည့်လေ့လာမှုများအထင်မြင်မှားစေသောဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
“ ဘာသာရေး” သို့မဟုတ်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်ခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ porn အသုံးပြုမှုကိုအဆင့်ဆင့်။ ဆန့်ကျင်သောသက်သေကိုပိုမိုကြည့်ရှုကြပါစို့ သုတေသီများအားဖြင့်4တရားဝင်ဝေဖန်မှု).
အရေးကြီးသောမွမ်းမံမှု 2019: ဤ“ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” (Joshua Grubbs နှင့် Samuel Perry) ၏အဓိကစာရေးဆရာနှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏အစီအစဉ်အပေါ်အခြေခံသောဘက်လိုက်မှုများကိုအတည်ပြုခဲ့သည် တရားဝင် ပူးပေါင်းမဟာမိတ်များ နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley တိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေ၌တည်၏ YourBrainOnPorn.com။ Perry, Grubbs နှင့် www.realyourbrainonporn.com မှအခြားညစ်ညမ်းသော“ ပညာရှင်” များသည်ပါ ၀ င်သည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်။ စာဖတ်သူကိုသိသင့်ပါတယ် RealYBOP twitter (၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများ၏သိသာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ) လည်းအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းတွင်ပါဝင်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, ဂါယူဆပါသည် နှင့် NCOSE, Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား“ RealYBOP” ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ယောက်လည်းရှိသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္areာရီများဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ ချီးမွမ်းကြလော့ RealYBOP twitter ကိုဖွင့်သည်) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေနှင့် RealYBOP twitter ကိုသုံးသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (ကလေးညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ။ RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည်၎င်းတို့၏ RealYBOP အသင်း ၀ င်မှုကိုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများတွင်“ အကျိုးစီးပွားပmembershipိပက္ခ” အဖြစ်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
porn အသုံးပြုမှုကိုအဆင့်ဆင့်ဝေးနေဖြင့် Self-ရိပ်မိ porn စွဲ၏အပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်းကြသည်
ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုကြောင်းတည်းသောလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနာရီနှင့်အတူစှဲလမျးသူ, ဘာသာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကငျြ့ဝတျမရရှိခြင်း၏အဖြစ်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ် Self-ဖော်ထုတ်ခြင်း။ CPUI-9 ဟုခေါ်သောချို့ယွင်းချက်တူရိယာကိုအသုံးပြုသည့်လေ့လာမှုများတွင်အခြေပြုထားသော၎င်းတွေ့ရှိချက်များသည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” (“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်ဘာသာရေးအရှက်ကွဲခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း”) နှင့် ပတ်သက်၍ ဂရုတစိုက်တည်ဆောက်ထားသည့်ဇာတ်ကြောင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ In ဤ လေ့လာမှုတစ်ခုစှဲလမျးသူအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အမြင်နှင့်အတူအင်အားအကောင်းဆုံးဆက်စပ်မှုနှင့်အတူရှိ၏ porn အသုံးပြုမှုနာရီ။ ဘာသာရေးဆီလျှော်ခဲ့တာနှင့် Self-အမြင်အကြားအခြို့သောဆက်စပ်မှု porn အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းတစ်ခုစှဲလမျးသူနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence အဖြစ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆရှိခဲ့စဉ်ကအကြမ်းဖျင်းခဲ့သည် တဝက် နာရီ-of အသုံးပြုမှုဆက်စပ်မှု။
တိုတိုမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကသူတို့စွဲခဲ့ကြသည်ထင်တဲ့သူ တကယ်ကပို porn ကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသည်တစျ compulsive (သို့မဟုတ်စွဲ) porn အသုံးပြုသူကိုမျှော်လင့်မယ်နည်းတူ။
ဒီသုတေသန CPUI-9 လေ့လာမှုများအပေါငျးတို့သအားနည်းစေပြီးဘယ်လိုနားလည်ရန်ပိုမိုနောက်ခံအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ (ထို CPUI-9 ၏တစ်ဦးကအသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှုဒီစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်ပေါ်လာပါ။ ) အဓိကထိုးထွင်းသိမြင်သည့် CPUI-93"အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲ / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ" မေးခွန်းများကိုလည်းပါဝင်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ပုံမှန်အားဖြင့်စွဲလမ်းတူရိယာထဲမှာမတှေ့ - ယင်း၏ရလာဒ်များ skew ရာ, ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများအဘာသာရပ်များစံစွဲ-အကဲဖြတ်တူရိယာအပေါ်လုပ်ပေးထက်နိမ့်ဂိုးသွင်းဖို့ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့် Non-ဘာသာရေးအသုံးပြုသူများသည်ဂိုးသွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအားနည်းချက်ရှိတဲ့ကိရိယာကသူ့ဘာသာသူထိခိုက်မှုအနည်းငယ်သာရှိနိုင်ပေမယ့်ဖန်တီးသူက“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို CPUI-9 ရှိစုစုပေါင်းရမှတ်နဲ့ရောစပ်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်အလွန်အထင်မြင်မှားစေသောအသစ်တစ်ခုကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီး၎င်းအားညစ်ညမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောထောက်ခံသူများကချက်ချင်းပင်ဖမ်းယူပြီးမီဒီယာတစ်ခုလုံးတွင်ထိုးနှက်ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုဟူသောဝေါဟာရသည်အလွန်အကံျွအထောက်အကူပြုသည်။ ဒါပေမယ့်လူတွေ assumed သူတို့က "ရိပ်မိစွဲ" အဓိပ်ပာယျကိုနားလည်သဘောပေါက်။ ဆိုလိုသည်မှာ CPUI-9 တီထွင်သူ Dr. Grubbs ကအမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုကို“ စွဲလမ်းမှုယုံကြည်ချက်” နှင့်ခွဲခြားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုသူတို့ယူဆသည်။ သူမရှိခဲ့ သူသည်သူ၏“ ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုစာရင်း” CPUI-9 (မေးခွန်း ၉ ခုကိုစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်ပြန်လည်ပြသထားသည်) ကိုလှည့်စားတံဆိပ်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ဒေါက်တာဂရော့ဘ်စ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စွဲသူများအားလိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်သူတို့၏မီဒီယာများကတွန်းအားပေးသည့်မီဒီယာအတွင်းသို့ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသွားသည့်အထင်လွဲမှားမှုများကိုပြုပြင်ရန်မကြိုးစားခဲ့ပါ။
ဂျာနယ်လစ်မှားယွင်းစွာအဖြစ် CPUI-9 တွေ့ရှိချက်တက်ချုပ်ဖော်ပြလမ်းလွဲ:
တကယ်အချို့ client များဖြစ်သောကြောင့်ပင်လျှင်အချို့သောစိတ်ရင်း Clinician, duped ခဲ့ကြသည် do သူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းမှုဟာသူတို့ရဲ့ကုထုံးပညာရှင်တွေထင်ထားတာထက်ပိုပြီးအဖျက်စွမ်းအားပိုစေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကုထုံးပညာရှင်များက Grubbs ၏စမ်းသပ်မှုသည်မှားယွင်းသောဖောက်သည်များကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်အထီးကျန်စေသည်ဟုယူဆပြီး၊ သူတို့သည်အသစ်သောမှတ်စုများကိုအခိုင်အမာလက်ခံခဲ့သည်။
စကားကိုတတ်သကဲ့သို့ "မကောင်းတဲ့သိပ္ပံများအတွက်သာရောဂါပျောက်ကင်းပိုပြီးသိပ္ပံဖြစ်ပါတယ်။ " နဲ့ရငျဆိုငျ စဉ်းစားဟန်သံသယ သူ၏ယူဆချက်များနှင့်မီဒီယာ၏အခြေအမြစ်မရှိသောပြောဆိုချက်များသည်သူ၏ CPUI-9 တူရိယာသည်အမှန်တကယ်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်အမှန်တကယ်ခွဲခြားနိုင်သည်ဟုဒေါက်တာဂရော့ဘ်စ်ကနောက်ဆုံးတွင်သိပ္ပံပညာရှင်အဖြစ်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည်မိမိယူဆချက်များ / ယူဆချက်များကိုတိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ရန်လေ့လာမှုကိုကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။မဟုတ် ) ကို CPUI-9 ကိုသုံးနိုင်သည်။ pre-မှတ်ပုံတင်ရေးဒေတာစုဆောင်းပြီးနောက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယူဆချက်ကနေသုတေသီများကာကွယ်အသံသိပ္ပံနည်းကျအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Grubbs ၏ရလဒ် Pre-မှတ်ပုံတင်လေ့လာမှု စာနယ်ဇင်း popularize မှကူညီပေးခဲ့သကြောင်း ( "porn စွဲရုံအရှက်ကွဲ") သည်သူ၏အစောပိုင်းကောက်ချက်နှင့် meme နှစ်ဦးစလုံးဆန့်ကျင်.
အသေးစိတ်: Dr. Grubbs သည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုသည်အမှန်စင်စစ်“ သင်ကိုယ်တိုင် porn စွဲလမ်းနေသည်ဟုယုံကြည်” ရန်အဓိကကြိုတင်ခန့်မှန်းသူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်စတင်ခဲ့သည် သူနှင့်သူ၏အဖွဲ့သည်ကောင်းမွန်သောအရွယ်အစား၊ မတူကွဲပြားသောနမူနာ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးစသည်တို့) ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သူ အွန်လိုင်းရလဒ်များကို posted, သူ့အဖွဲ့ရဲ့စက္ကူပေမယ့်သေးတရားဝင်ထုတ်ဝေနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဤအချိန်ကိုမိမိအပေါ်အားကိုးမပြုခဲ့ CPUI-9 တူရိယာ။ အဲဒီအစား၊ Grubbs အဖွဲ့ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများရဲ့တိုက်ရိုက် 'ဟုတ် / မဟုတ်' မေးခွန်း ၂ ခုကိုမေးခဲ့သည်။ငါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်။ ""ကျွန်မအနေနဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်မည်။ ") နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအပေါ်အသုံးပြုမှုနာရီ, ဘာသာရေးနှင့်ရမှတ်အဖြစ် variable တွေကိုနှင့်အတူရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်" ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ porn ၏ "မေးခွန်းလွှာ။
တိုက်ရိုက်ကသူ၏အစောပိုင်းတောင်းဆိုမှုများဒေါက်တာ Grubbs နှင့်သူ၏သုတေသနအဖွဲ့ကဆနျ့ကငျြ သငျသညျ porn စွဲနေကြသည်ယုံနှင့်အတူပါဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေပါသည်တွေ့ရှိခဲ့ porn အသုံးပြုမှုနေ့စဉ်နာရီ, မဟုတ် ဘာသာရေးနှင့်အတူ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်ချအဖြစ်, ဒေါက်တာ Grubbs ၏အစောပိုင်းလေ့လာမှုများအချို့ လည်း တွေ့ရှိရသောတွေ့ရှိချက်များအရနာရီပေါင်းများစွာသည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုထက်ဘာသာရေးခံယူချက်ထက်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” (စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်) ကိုခန့်မှန်းသည်။ လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး ပင်မမီဒီယာ (သို့မဟုတျဒေါက်တာ Grubbs ၏အကျဉ်းချုပ်) သို့
ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence နှင့်ဘာသာရေးရိပ်မိစွဲလမ်းရဲ့အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြကြိုတင်စာပေ [CPUI-9 စုစုပေါင်းရမှတ်] မတူဘဲ, သုံးခုစလုံးနမူနာကနေရလဒ်တွေကိုအထီးကျား, မများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပြုအမူတွေကိုအများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ဦးအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ပြ ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူ။
အမျိုးသားဖြစ်ခြင်းသည်“ စွဲလမ်းခြင်း” ဟုမိမိကိုယ်ကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သည်။ Dr. Grubbs ၏အဆိုအရလေ့လာမှုအသစ်၏နမူနာတွင်“ စွဲချက်” ကိုဖြေဆိုသောယောက်ျား၏နှုန်းထားများသည်“ စွဲချက်” ကိုဖြေဆိုသောယောက်ျား ၈၀၀၀ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိသည်ဟုဖြေကြားခဲ့သည်။ ဤနှုန်းထားများနှင့်ကိုက်ညီသည် အခြားအ 2017 သုတေသန (ကောလိပ်၏ 19% စွဲကူထီး) ။
တိုတိုမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူအချို့တို့တွင်အကျယ်ပြန့်ဒုက္ခဆင်းရဲလည်းမရှိ။ ပြဿနာအသုံးပြုမှုမြင့်မားမှုနှုန်း "၏ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုပြုရောဂါကြောင့်အကြံပြုcompulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ"အမှန်တကယ်ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုကိုစနစ်တကျလေ့လာဆည်းပူးသည်သူတို့အားဆင်းရဲခက်ခဲမှုကိုစနစ်တကျကုသဖြစ်ကြောင်းအာမခံထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လေ့လာမှုအသစ်တွင်သူတို့၏ရလဒ်များကို အခြေခံ၍ ဒေါက်တာ Grubbs နှင့်သူ၏တွဲဖက်စာရေးဆရာများက“ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရှင်များကနိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ အလေးအနက်ထားညစ်ညမ်းစွဲအဖြစ်ဖော်ထုတ်ဖောက်သည်များ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများယူသင့်တယ်။ "(အလေးပေးထောက်ပံ့)
“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း” သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများအတွက်မထူးခြားပါ Grubbs et al ။ မှတ်ယူ
Grubbs ၏workရိယာ၌“ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ညီညွတ်ခြင်း” သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများအတွက်ထူးခြားသည်ဟုယူဆရသည်မှာမှတ်သားရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ တကယ်တော့ဒီယူဆချက်မမှန်ကန်ပါ။ စာရေးသူ Gene M. Heyman မှ“ Deriving စွဲ” ဟူသောခေါင်းစဉ်သစ်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ဒဿနိကဗေဒနှင့်စွဲလမ်း၏သိပ္ပံ Routledge လက်စွဲစာအုပ်, 11 ဇွန်လ 2018), ဒါကြောင့်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာစွဲထဲမှာတည်ရှိ:
မူးယစ်ဆေးဖြတ်၏ Accounts ကိုမကြာခဏကိုယ်ကျင့်တရားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပါဝင်သည်။ အခြို့သောကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ, ဟောင်းစွဲ (သူတို့က, မိသားစုဝင်တွေရဲ့လေးစားမှုပြန်လည် သာ. ကောင်း၏မိဘတစ်ဦးပြုမူသင့်တယ်ဘယ်လိုဟာသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အရည်အချင်းသူသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဆုံးခနျ့မှနျးနှင့်သူတို့၏ဘဝများထိန်းချုပ်စေချင်ကြောင်းရှင်းပြ ဥပမာ Biernacki 1986; Jorquez 1983; Premack 1970; ။ ။ Waldorf et al 1991), p.32
ထို့ကြောင့်“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှု” သည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုတားဆီးမည့်အစားအကာအကွယ်ပေးသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပုံရသည်။ အချို့သောစွဲသူများအတွက်မူ၎င်းသည်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ဘာသာရေးအရအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းမဟုတ်” ဘဲ၊
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ယောရှုဂရော့ဘ်စ်၏“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကိုက်ညီမှု” ပုံစံသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအခြားစွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးရှိသောသူများသည်မိမိတို့၏အပြုအမူများကိုကိုယ်ကျင့်တရားမလိုက်နာသည့်အယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
အံ့သြ, Grubbs, ပယ်ရီ, အလိုရှိနှင့်ရိဒ် “ ပြန်လည်သုံးသပ်” CPUI-9 အခြေပြုဇာတ်ကြောင်းကိုရှင်သန်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်ခြင်းအဖြစ်သရုပ်ဖော်သည်။ သူတို့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုတေသနပြုချက်များကိုလျစ်လျူရှုထားပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့၏ကောက်ချက်နှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ အဆိုပါ "ပြန်လည်သုံးသပ်" ကိုလည်းမလုံလောက်၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြသည် ဖာနန်ဒက်စ, Tee & ဖာနန်ဒက်ဇသောလည်းလေ့လာမှုတစ်ခု ခိုးထိခိုက်စေ လာမယ့်အပိုင်းရှင်းပြအဖြစ်ဤစာရေးဆရာများပစ္စုပ္ပန်ဇာတ်လမ်း။
တစ်ဦးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ် Non-Grubbs လေ့လာမှု လည်း CPUI-9 ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုစစ်ဆေးရန်စွမ်းရည်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်
အထက်ပါလေ့လာမှုဒေါက်တာ Grubbs ရဲ့သုံးသပ်ချက်နှင့်သူတို့ကို ပတ်သက်. သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပေါ်သံသယကိုနှင်ထုတ်ဖို့တစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်။ စက်တင်ဘာလ, 2017 ခုနှစ်တွင်နောက်ထပ်လေ့လာမှုဒေါက်တာ Grubbs ရဲ့ယူဆချက်တဦးတည်းစမ်းသပ်ပြီးသောပြည်မှထွက်လာသော: ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့သလား? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏အခန်းက္ပ Exploring.
(အခြားတွေ့ရှိချက်များထဲတွင်ဒီနေရာမှာနက်ရှိုင်းတှငျဆှေးနှေး), အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း (abstinence ကြိုးစားမှုမအောင်မြင်ခဲ့) ကို CPUI-9 ရဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်း အမှန်တကယ် စွဲ 1-6-9, ဒါပေမယ့် CPUI-7 ရဲ့အပြစ်ရှိတယ်နှင့်အရှက်ကွဲခြင်း (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ) မေးခွန်းများ 9-9 နှင့်အတူမ။ အလားတူစွာ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကို“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု” သည် CPUI-XNUMX“ Perceived Compulsivity” ရမှတ်များနှင့်အနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဤရလဒ်များအရ CPUI-9 အပြစ်ရှိမှုနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းမေးခွန်းများ (၇-၉) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (သို့မဟုတ်“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှု”) ၏အကဲဖြတ်မှုတွင်မပါ ၀ င်သင့်ကြောင်းဖော်ပြသည် သူတို့ porn အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေမသက်ဆိုင်သောများမှာ.
အချုပ်အားဖြင့်ဒေါက်တာ Grubbs ၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လေ့လာမှုနှင့် ဖာနန်ဒက်ဇ လေ့လာမှုများအောက်ပါအချက်များကိုကိုထောကျပံ့:
“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” လေ့လာမှုများ (သို့မဟုတ် CPUI-9 ကိုအသုံးပြုသောမည်သည့်လေ့လာမှုမဆို) သည်အမှန်တကယ်တွင်“ ရိပ်မိသောစွဲလမ်းမှု” သို့မဟုတ်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအပေါ်ယုံကြည်မှု” သို့မဟုတ်“ သူတစ်ပါးကိုမိမိကိုယ်ကိုတံဆိပ်ကပ်သူဟုသတ်မှတ်ခြင်း” ကိုအကဲဖြတ်မထားပါ အမှန်တကယ်စွဲကနေ "ရိပ်မိ။
အဆိုပါ CPUI-9 အပေါ်နောက်ခံနဲ့ဘယ်လိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးရလဒ်များကို skews
“ ကိုယ်ကျင့်တရားမညီညွတ်ခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြ:နာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis လုပ်ခြင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံ” ၏တရားဝင်ဝေဖန်မှုများ (ညစ်ညမ်းသုတေသီများက)
ကိုယ်ကျင့်တရား Incongruence နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စှဲသို့မဟုတ် compulsive သုံးစွဲမှုယန္တရားများကြောင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပြဿနာများအပေါ်သီအိုရီထင်မြင်ယူဆ: အနှစ်ဦး "အခြေအနေကတော့" အကြုံအဖြစ်သီအိုရီထူးခြားသောရှိပါသလား (2018) က Matthias အမှတ်တံဆိပ်, Stephanie Antons Elisa Wegmann, မာ့ခ် N. Potenza